Wixii Guusha U Sahlay Valencia, Fashilkii Frankie de Jong, In Uu Tegayo Vidal Iyo Tababare Quique Setién Oo Ka Hadlay Guul-darradii Barcelona Ee Shalay | Laacib.net
Tababare Quique Setién ayaa ka hadlay guul-darradii shalay ay kooxdiisa Barcelona kala soo kulantay Valencia oo ay ugu tagtay Mestalla Stadium, halkaas oo ay kala soo laabatay khasaare 2-0 ah.
Tababare Setien oo labadii ciyaarood ee hore ee uu layliyey Barcelona soo helay guulo, ayaa kulankiisii saddexaad oo shalay ahaa waxa uu la kulmay xaqiiqada in macallinkii ka horreeyey lagu caydhiyey qalad.
Ciyaartii ugu horreysay ee Setien, waxay Barcelona samaysay rikoodh baasaska iyo kubbad haysashada ah, laakiin waxay awoodi kari waayeen inay sii wadaan bandhiggaas fiican, waxaana taas qiray tababarahaa oo warbaahinta la hadlay kaddib ciyaartii shalay.
“Haddii aan si daacad ah u hadlo, runtii si xun ayaanu u ciyaarnay qaybtii hore, waxaananu u ogolaanay Valencia inay afar ama shan jeer na garaacaan. Qaybtii dambe waanu fiicnayn laakiin waxaanu awoodi weynay inaanu goolka furitaanka la nimaadno, wax kastaba Valencia wax badan ayay u qalmaysay.” Ayuu yidhi Setien.
Tababaruhu waxa uu sheegay in ciyaartoygiisu fulin kari waayeen taatikadii uu u dejiyey, taasina noqotay dhibaatada, gaar ahaan kubbadaha dhaadheer oo ay xidhiidhin kari waayeen, waxaanu si gaar ah u garab istaagay Frankie de Jong oo bandhig aad u hooseeya la yimid, waxaanu yidhi: “Kooxda oo dhan waxa ka dhex jirtay isfaham la’aan. Frenkie siiyaabo gaar ah ayuu u ciyaarayay bilihii tegay, anaguna hadda waxaanu weydiisanay inuu wax kale qabto.”
Ugu dambayn waxa uu Setien ka jawaabay su’aal laga weydiiyey mustaqbalka laacibka khadka dhexe ee arturo Vidal iyo haddii ay ogolaanayaan inay bixiyaan lacagta lagu xidhay laacibka bartilmaameedka u ah ee Rodrigo oo Valencia ah, waxaanu ku jawaabay: “Hore ayaan u caddeeyey sida aanan uga hadlaynin suuqa iibka. Ma jiraan wax aan ka idhaahdo sidii aan horeba u sheegay. Waxa kaliya ee aan ka odhan karayo Rodrigo na waa inuu yahay ciyaartoy fiican oo aan jeclaan lahaa inaanaan iska hor imanin maanta (shalay).”